"Wiil ay wada casheeyeen ayaa dilay" - Dhacdo kale oo xanuun badan oo ka dhacday magaalada Muqdisho + Video - Caasimada Online
Home Warar “Wiil ay wada casheeyeen ayaa dilay” – Dhacdo kale oo xanuun badan...
“Wiil ay wada casheeyeen ayaa dilay” – Dhacdo kale oo xanuun badan oo ka dhacday magaalada Muqdisho + Video
Muqdisho (Caasimada Online) – Dhacdo kale oo xanuun leh ayaa xalay ka dhacday Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markii wiil dhallinyaro ah oo sawir qaade ahaa lagu dilay xaafada Tarabuunka.
Abuukar Muukhtaar, oo ahaa Aabe 39 jir ah, islamarkaana ku shaqeysta xirfadda sawir qaadista ayaa waxaa dilay nin ay saaxiibo ahaayeen, oo dilak ka hor ay ka wada casheeyeen gurigiisa.
Dilka ayaa yimid kadib markii qofka lagu tuhmayo fal dambiyeedkan uu qaatay taleefonka Abuukar, ayada oo Abuukar uu kadib isku dayey inuu ka doonto, balse beddelkeeda la dilay, sida ay sheegeen ehelkiisa.
Dilka ayaa waxaa la sheegay dilka loo adeegsaday Toorey Abuukar looga dhuftay qoorta.
Aabahaan ayaa la sheegay marka uu gurigiisa ka baxayey inuu wiil uu dhalay ku dhahay “Aabe labada daan iga shumi inaan soo noqon ayaa laga yaabaa’e,” waxaana daqiiqado kadib qoyskiisa soo gaartay dhimashada wiilkooda.
Marxuumka la dilay ayaa waxay shaqdiisa aheyd duubista Aroosyada iyo xafladaha, sidoo kalana wuxuu ku shaqeysan jiray xirfadda qurxinta guryaha.
“Abuukar moobeelkiisa ayuu jaajar gashtay, waxaa kadib yimid wiilka dili doono kadibna qaatay moobeelkiisa, isagana sariirta ayuu iska koray oo ma ogeyn in moobeelka laga qaatay. Gabar meesha fadhisay ayaa tiri Moobeelkaaga ayuu kaa qaatay, wuu kasoo daba orday markii uu damcay inuu moobeelkiisa kasoo qaato oo uu ka daba tagayna Toorey ayaa lagu dhuftay naftana dhulka lama dhicin,” ayey tiri hooyo kamid ah ehelka marxuumka.
Ehelada wiilka la dilay ayaa magaca gacan ku dhiiglaha falkaan geystay ku sheegay Bishaar Farabadne oo ay ahaayeen daris, waxayna sheegeen inaysan aqoon halka uu aaday.
Ehelada marxuumka ayaa Dowladda Soomaaliya ka codsaday inay cadaaladda hor keeneyn ninka ka dambeeyey dilka wiilkooda.
Maalmahii lasoo dhaafay Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa ka dhacayey dilal yaab leh oo intooda badan ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan dowladda mana jirto illaa hadda cid la hor keenay Caddaaladda.